အဲလ်ဘတ် အိုင်းစတိုင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ဂျာမန်နိုင်ငံဖွား ရူပဗေဒပညာရှင်နှင့် နှိုင်းရသီအိုရီကို တီထွင်ဖန်တီးသူ
(အိုင်းစတိုင်း မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
အဲလ်ဘတ် အိုင်းစတိုင်း (အင်္ဂလိပ်: Albert Einstein/ˈaɪnstaɪn/ EYEN-styne; ဂျာမန်: [ˈalbɛʁt ˈʔaɪnʃtaɪn] ( နားဆင်)) ကို ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ အမ်းမြို့မှာ ၁၈၇၉ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့က ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ သူ၏ မိဘများသည် ယဟူဒီ (ဂျူးလူမျိုး) နွယ်ဖွားများဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်ပစ္စည်း အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အိုင်းစတိုင်း၏ ဖခင် Hermann Einstein သည် အောင်မြင်သော စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက် မဟုတ်ခဲ့သော်ငြားလည်း ဂျာမန် ဂန္ထဝင်မြောက် စာပေများ၊ ဒဿနကျမ်းများနှင့် ကဗျာစာပေများကို မြတ်မြတ်နိုးနိုး နှစ်သက်တတ်သူ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သူ၏ အိမ်တွင် ခံ့ညားသည့် စာကြည့်ခန်းတစ်ခုကို ထားရှိပြီး အိမ်ကိုအလည်လာသော ဧည့်သည်များနှင့်လည်း စာပေအကြောင်း၊ ဒဿနအကြောင်း ပြောဆိုဆွေးနွေးတတ်သူ ဖြစ်သည်။ အိုင်းစတိုင်း၏ မိခင် Pauline Koch သည် ဂီတအနုပညာကို နှစ်သက်သူဖြစ်ပြီး စန္ဒယားတီးကောင်းသူ ဖြစ်သည်။ အိုင်းစတိုင်းတွင် မွေးချင်းညီမတစ်ဦးရှိပြီး Maja ဟု ခေါ်သည်။ ခေတ်သစ်ရူပဗေဒ၏ ခက်မာ ၂ ခုဖြစ်သော (ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်နှင့်အပြိုင်) ယေဘုယျနှိုင်းရသီအိုရီကို မွမ်းမံဆန်းသစ်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။
Swiss Federal Polytechnic (၁၈၉၆–၁၉၀၀။ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့၊ ၁၉၀၀)
ဇူးရစ် တက္ကသိုလ် (ပါရဂူဘွဲ့၊ ၁၉၀၅)
Copley Medal (၁၉၂၅)
Gold Medal of the Royal Astronomical Society (၁၉၂၆)
တိုင်း(မ်) မဂ္ဂဇင်း၏ ရာစုနှစ်ရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် (၁၉၉၉)
၂ အိုင်းစတိုင်းနှင့် သင်္ချာ
၃ လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ခြင်း
သူ၏ ကျော်ကြားလှသည့် သီအိုရီကို ကမ္ဘာသိအောင် မထုတ်ပြန်ခင် တစ်နှစ်အလို ၁၉၀၄ ခုနှစ်က မီလီဗာက သူတို့ရဲ့ သားဦး Hans Albert ကို မွေးဖွားပေးခဲ့သည်။ အိုင်းစတိုင်းသည် သူ၏ သီအိုရီကို ကမ္ဘာသိအောင် ထုတ်ပြန်ပြီးသည့်နောက်တွင် သဘောတရားပိုင်းကနေ သင်္ချာ ရူပဗေဒ ဖြစ်လာအောင် ကိန်းဂဏန်းတွေ၊ ညီမျှခြင်းတွေနဲ့ ပြည့်စုံလာသည်အထိ ခြောက်နှစ်ကြာ ကြိုးစားခဲ့လေသည်။ ၁၉၁၁ ခုနှစ်ရောက်သောအခါ သူ၏ အထူး နှိုင်းရသီအိုရီ (Special Relativity Theory) သည် သင်္ချာပညာရပ်ဆိုင်ရာ ညီမျှခြင်းများနှင့် ပြည့်စုံသွားလေတော့သည်။
၁၉၁၀ ခုနှစ် ဇွန်လ တွင် မီလီဗာက ဒုတိယသား Edward ကို မွေးဖွားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် သူတို့မိသားစုမှာ ကျပ်ကျပ်တည်းတည်း ရုန်းကန်နေခဲ့ကြရသည်။ ၁၉၁၀ နှစ်ကုန်ခါနီးတွင် ဩစတြီးယား ဟန်ဂေရီ အင်ပါယာ၏ ဘုရင်က အိုင်းစတိုင်းကို ပရပ်တက္ကသိုလ် (University of Prague) တွင် ပါမောက္ခတာဝန် ထမ်းဆောင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ ထိုနေရာသည် ဇူးရစ်ထက် အစစအရာရာ သာသည့် အခြေအနေရှိသောကြောင့် အိုင်းစတိုင်းက သွားချင်သော်လည်း လူမျိုးကြီး စစ်ဝါဒကို မုန်းတီးသော မီလီဗာက အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်ခဲ့လေသည်။ သို့သော် အိုင်းစတိုင်းကတော့ ပရပ်တက္ကသိုလ်တွင် သုံးနှစ်ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့လေသည်။ ထိုနေရာတွင် အဖိနှိပ်ခံဘဝကို နာကြည်းနေသော ချက်လူမျိုးများနှင့် ယဟူဒီလူမျိုးများ အများအပြား ရှိလေသည်။ ပရပ်တက္ကသိုလ်မှာ အိုင်းစတိုင်း ရှိနေစဉ်က စာရေးဆရာ ကပ်ဖ်ကာ (Franz Kafka) နှင့် ယဟူဒီခေတ်ပညာတတ်များ ဦးဆောင်ပြီး ဇီယွန်လှုပ်ရှားမှုများ လုပ်နေချိန် ဖြစ်လေသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ "Albert Einstein. 1879–1955" (1 November 1955). Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society 1: 37–67. doi:10.1098/rsbm.1955.0005.
↑ Heilbron၊ John L., ed. (2003)။ The Oxford Companion to the History of Modern Science။ Oxford University Press။ p. 233။ ISBN 978-0-19-974376-6။
↑ Wells၊ John (3 April 2008)။ Longman Pronunciation Dictionary (3rd ed.)။ Pearson Longman။ ISBN 978-1-4058-8118-0။
↑ Albert Einstein – Biography။ Nobel Foundation။6March 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7March 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Einstein and his love of music" (PDF)၊ Physics World၊ January 2005။
↑ Fujia Yang; Joseph H. Hamilton (2010)။ Modern Atomic and Nuclear Physics။ World Scientific။ ISBN 978-981-4277-16-7။
↑ "The relative beauty of the violin"၊ The Independent၊ 28 January 2011။ 25 December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 21 November 2015။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အဲလ်ဘတ်_အိုင်းစတိုင်း&oldid=746067" မှ ရယူရန်
၅ ဇွန် ၂၀၂၂၊ ၀၇:၁၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၅ ဇွန် ၂၀၂၂၊ ၀၇:၁၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။